विज्ञान प्रविधि | Aajako Shiksha विज्ञान प्रविधि | Aajako Shiksha
जिन विशेषज्ञ भन्नुहुन्छ–भाइरसको खतराबाट बच्न जेनेटिक्स भ्याक्सिन चाहिन्छ
२०७६ चैत्र १४ गते
प्रा.डा. नन्दबहादुर सिंह मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकूलपति हुनुहुन्छ । उहाँ जिन विशेषज्ञ हुनुहुन्छ । द युनिभर्सिटी अफ टोकियोबाट नेपालका विभिन्न जनजातिहरुमा रोगका विरुद्ध लड्न सक्ने जिनहरुमा उहाँले पिएचडी गर्नुभएको छ । कोभिड–१९ को महामारी फैलिरहेका बेला कस्ता मानिसले रोगसँग प्रतिरोध गर्न सक्छन्, कस्ताले सक्दैनन् भन्ने सम्बन्धमा उहाँसित कुराकानी गरिएको छ । वरिष्ठ जिन विशेषज्ञ प्रा.डा. सिंह भन्नुहुन्छ– बेलायतलगायत यूरोपमा सन् १३४७ देखि शुरु भएर १७ औं शताब्दीसम्म पट ...
यो रुखले फल होइन बिजुली दिन्छ !
वासिङटन । विजुली बत्तीको उपयोग विश्‍वभरी नै महत्वपूर्ण मानिन्छ। किनकी धेरै ठूला ठूला काम विजुलीले सम्भव बनाएको छ। यही कारण वैज्ञानिकहरुले एउटा यस्तो रुखको विकास गरेका छन् जसले फल होइन की विजुली उत्पादन गर्ने गर्छ। अमेरिकास्थित इयवा यूनिवर्सिटीका शोधकर्तारुले विजुली दिने रुखको विकास गरेका छन्। उनीहरुका अनुसार जब यो रुख हावामा कृत्रिम पातहरुका साथ हलिन्छ तब रुखबाट बिजुली उत्पन्‍न हुन्छ। यसबाट उत्पादन भएको विजुलीले घरमा चल्‍ने उपकरणलाई चार्ज गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ भने घरेलु काममा सम ...
काठमाडौं । नेपालमा क्रियाशील चिकित्सक, कार्यरत अस्पताल र विशेषज्ञतासहित स्वास्थ्यसम्बन्धी आधारभूत सूचनासमेत दिने गरी नेपाली चिकित्सक संघले मोबाइल एप ल्याएको छ। संघले देशभर कार्यरत चिकित्सकको विवरण संकलन गर्दै एपमार्फत सेवाग्राहीसम्म पुर्याएउन लागेको हो। संघको एपमा चिकित्सकको कार्यक्षेत्र, विशेषज्ञताबारे विस्तृत जानकारीसहित स्वास्थ्यक्षेत्रका लागि महŒवपूर्ण तथ्यांक उपलब्ध छ। उक्त एप हेल्थ कन्सर्न नेपाल नामक संस्थाको प्राविधिक सहयोगमा तयार पारिएको हो। संघका अनुसार हाल नेपाल मेडिकल काउन्सिलम ...
हरेक दिन १५ हजार नेपाली इन्टरनेटमा जोडिन्छन्
हरेक दिन कति नेपाली इन्टरनेट सञ्जालमा जोडिएलान् ? अनुमान दुईरचार सय वा एकरदुई हजार । तपाईंको अनुमान एकरदुई हजारमा सीमित छ भने गलत हुनुहुन्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा, दुईरचार हैन, हरेक दिन १५ हजारभन्दा बढी नेपाली इन्टरनेटमा जोडिरहेका छन् । प्राधिकरणले यसै महिना निकालेको पछिल्लो व्यवस्थापन सूचना प्रणाली ९एमआईएस० प्रतिवेदनले यस्तै तथ्यांक देखाउँछ । प्राधिकरणले हरेक महिना एमआईएस प्रतिवेदन निकाल्छ । पछिल्लो एमआईएस प्रतिवेदनमा गत चैत महिनाको विवरण समावेश छ । प्रतिवे ...
काठमाडौं । कक्षा १२ मा विज्ञान विषय लिएर अध्ययन गरिरहेका ५ जना बिद्यार्थीले आकासबाट मल, बिउ, तथा बिषाधी छर्न मिल्ने ड्रोन बनाएका छन् । पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा सम्पन्न प्रविधी प्रर्दशनमा उक्त ड्रोनले पुरस्कार समेत जितेको छ । ललितपुरमा रहेको ओमेगा क्याम्पसका बिद्यार्थीले ३ महिना लगाएर ड्रोन निर्माण गरेका हुन् । प्रविधी प्रदर्शनी भएका बेला केही देखाँउ भनेर ५ जना साथिहरु मिलेर उक्त ड्रोन बनाएको बिद्यार्थी प्रमोद अधिकारीले बताए । उनीहरुले नेपाल कृषिप्रधान देश भएकोले रासायनिक मल, बिउ तथा विषाध ...
२१ लाख पर्ने कलम
स्वीटजरल्याण्डको चर्चित कलम निर्माता कम्पनी मेइसन कारान डि’आच र लक्जरी घडी निर्मार्ता एमबी एण्ड एफ मिलेर लिमिटेड एडिसन कलम निर्माण गरेको छ । रकेटको आकारमा देखिने कलमको आफ्नै लञ्च प्याड पनि रहेको छ । यसको मूल्य करिब २१ लाख नेपाली रुपैयाँ तय गरिएको छ । एस्टोग्राफ नाम दिइएको यो कलम कम्पनीले हालसम्म डिजाइन गरेको सबैभन्दा जटिल कलम भएको कारान डि’आचले जनाएको छ । यसको अवधारणा मात्र निर्माण गर्न ४ वर्ष लागेको र यसको अन्तिम स्वरुप तयार गर्न थप १२ महिना लागेको कम्पनीले बताएको छ । यसमा ९९ वटा फ ...